Maxkamadda ICC oo ogolaatay in la baaro xasuuqii loo geystay muslimiinta Mayanmar – Radio Muqdisho
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ayaa oggolaatay in baaritaan buuxa lagu sameeyo dambiyada lagu soo eedeeyay dowladda Myanmar ee ku saabsan xasuuqa loo geystay dadka Rohingya eek u nool gobolka Rakhine.
Garsoorayaasha maxkamada ICC ayaa maalinimadii shalay taageeray codsi dacwad oogayaasha ee la xiriirta in la baaro eedeymaha loo heysto xukuumadda Barma e ku aadan gaboodfalka dhanka aadanaha ah iyo xasuuqii ciidamada Mileteriga ay ku daadiyeen dhiigga faraha badan ee dadka Rohingya .
in ka badan 740,000 Rohingya ayaa lagu qasbay in ay ka barakacaan deegaankooda,una baxsadaan gudaha dalka Bangaladesh,taasoo Qaramada Midoobay ay falkaasi ku sheegtay ama ku tilmaantay in uu ka dhigan yahay xasuuq iyo dambiyo dagaal.
Bisha Sebtember Sanadkii 2018-kii Xeer ilaaliyaha guud ee ICC Fatou Bensouda ayaa loo ogolaaday in ay furto baaritaan hordhac ah oo ku socda dowladda,waxayna isla markiiba dalbatay in la bilaabo baaritaanno dhameystiran.
Qaar ka mid ah dalalka Mareykanka iyo Yurub ayaa horay u bilaabay cunaqabateyn dhanka safarka ah iyo hakin hantida madax ka tirsan ciidamada Mayanmar iyo siyaasiyiin kale.
Wasaaradda Warfaafinta oo soo saartay qoraal ay ku hagayso hay’adaha Caalamiga ah ee ka howl-gala Dalka